Usexoshe abesebenza nabo uBonang
UMETHULI wezinhlelo zethelevishini, uBonang Matheba, usehlukene nenkampani ebesebenzisana nayo Isithombe: INSTAGRAM
SEKUGQABUKE igoda phakathi kwesilomo sezinhlelo zethelevishini nabesebenzisana nabo kulandela izinsolo zokuxhashazwa kwaso. UBonang Matheba, ozinze eMelika, ukhiphe isitatimende ngokuqopha i-video ememezela ukuthi usekhombe indlela inkampani abesebenzisana nayo maqede wayalela abameli bakhe ukuthi benze uphenyo ngayo.
UBonang uthe le nkampani, angazange ayidalule igama, sekuphelile obekubahlanganisile nayo. Lokhu ukusho ngezwi lokudangala nobekuzwakala ukuthi uyazibamba kukhona afisa ukukudalula ngayo.
"Namhlanje ngifisa ukunazisa izindaba ezidumaza kakhulu. Kule minyaka edlule bengibambisene nenkampani ebibhekelele umsebenzi wami namabhizinisi. Konke ngikuyekele ezandleni zayo, ngiyethemba ngakho konke enginakho, ngayinikeza lonke uhlobo lomsebenzi ophathelene nami kusukela kwezokungcebeleka, imfashini namabhizinisi. Namhlanje ngiyayihoxisa inkontileka nabo, abasangimele nakwezamabhizinisi," kusho uBonang.
Eqhuba, uBonang uthe le nkampani izophenywa yithimba labameli bakhe ukuthi ngabe akukho yini okuphathelene nokuphula umthetho ebikwenza ngaye. "Ngiyalele abameli ukuthi benze uphenyo ngokuphulwa komthetho yinkampani namalungu ayo ayimele. Ngizobuya ezinsukwini ezimbalwa ezizayo neminye imininingwane ukuze nizoqonda ukuthi yini engiyibona iyisenzo sokungaziphathi kahle," kusho uBonang.